I-TCDD YHT yokuthenga iMachinist | RayHaber
[06 / 12 / 2019] Izinyathelo Zokhonkolo ezizothathelwa iSakarya Rail System Project	I-54 Sakarya
[06 / 12 / 2019] Isifunda saseMuratli seTekirdag Railway Splitting	I-59 Tekirdag
[06 / 12 / 2019] I-CHP Gürer ibuze uNgqongqoshe uTurhan uphendule wathi: Imali mboleko Yezindlu ze-TCDD	I-06 Ankara
[06 / 12 / 2019] Ukulindela eVangölü Express Adventure kuhle!	I-65 Van
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraI-TCDD YHT Machinist Yokuthenga
07 / 11 / 2019 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, Imisebenzi, sesitimela, JIKELELE, Isitimela esisheshayo, HEADLINE, TURKEY
I-TCDD YHT izokuqasha iMachinist - i-TCDD izokwenza Ukuqokwa Kwabasebenzi be-262: Izikhundla zabasebenzi ze-TCDD sezivuliwe kanti nokwabiwa kwabasebenzi kumenyezelwe ku-5.Nov.2019. Esinqumweni esishicilelwe ku-Official Gazette State Railways eyize 262 kwafakwa abasebenzi.
Isinqumo esishicilelwe kumagazini wamanje weGazethi Esemthethweni simi ngokulandelayo; Endabeni yamabhizinisi ophethwe nguhulumeni kanye nezinkampani ezingaphansi, ukuthengiselana okukhulunywe ngakho ngenhla kwenziwa ngaphakathi kwesilinganiso se-Decree Law No. 399.
Ngesinqumo sikaMongameli, ukwesulwa kanye nokuguqulwa kwezikhundla zabasebenzi ezizosetshenziswa kanye nezikhundla zabasebenzi abasebenza izinkontileka kanye nezikhundla nezikhundla ezakhiwe yi-Civil Serviceants ngaphansi komthetho we657 no.
I-TCDD SPECIALIZED STAFF
Esimemezelweni esishicilelwe, kwenziwa i-TCDD, i-Central ne-Provincial, Chief Chief, Inspector, Consultant, Isikhulu, iMenenja Yezemisebenzi, Imenenja, Isazi Esiyinhloko, UWagon Technologist, uchwepheshe oyisikhulu, YHT Mechanic kanye nabasebenzi bezengqondo.
Ithebula lokuqokwa kwabasebenzi le-TCDD
TCDD isikhungo Chief Isazi 28
TCDD isikhungo umhloli 1
TCDD isikhungo umeluleki 10
TCDD isikhungo isikhulu 26
TCDD yesifundazwe Umphathi Wezinsizakalo 3
TCDD yesifundazwe umqondisi 15
TCDD yesifundazwe Chief Isazi 19
TCDD yesifundazwe I-Wagon Technician 120
TCDD yesifundazwe uchwepheshe Chief 18
TCDD yesifundazwe Unjiniyela we-YHT 20
TCDD yesifundazwe Isazi sokusebenza kwengqondo 2
Ukusungulwa kusho ukwehlukaniswa kwabasebenzi. Kuzoqashwa abasebenzi ababiwe Imininingwane yokuqashwa okusha nokuqokwa kwangaphakathi ayikacaciswanga futhi isinqumo sesenziwe.
Mayelana nokumenyezelwa kwesinqumo sikaMongameli i-2019 / 373 eshicilelwe ephephandabeni elisemthethweni Chofoza lapha
Sizozama ukuphendula umbuzo wokuthi ngubani umshayeli nokuthi ungaba kanjani umshayeli. Umshayeli ungumshayeli kagesi, udizili noma isitimela sezitimela ezitakura abagibeli noma ezithwala izimpahla.
Igcoba izingxenye zemishini ye-locomotive futhi ithathe izindlela zokuphepha ezidingekayo, -Ugcina umbiko ngemuva kokuphothulwa kohambo futhi ugcwalisa izincwadi ezifanele (incwadi yesehlakalo, njll.).
KUSETJENZISELWA IZITOLO NEMIBHALO
I-locomotive (Steam, Diesel, Electric, Diesel-Electric), - Umsakazo, - Amamodeli we-Movement, - ama-Screwdrivers, amapulangwe, ama-wrench sets, amathuluzi ahlukahlukene, - Incwadi ye-Occurrence (incwadi lapho kuvela khona izinkinga).
Labo abafuna ukuba ngumakhenikha; - Ungasebenzisa iso-izinyawo nezinyawo ekusebenzisaneni, - Ungasabela ekukhuthazeni ngokushesha okukhulu, - Ungabona izinto eziningi ngesikhathi esithile, - Unakekelo, unesibopho, unegazi elibandayo, - Ungahlukanisa imibala, - Ukuqina empilweni yezengqondo, - Kujabulisa ukusebenza nemishini kanye nalabo abanamakhono wokusebenza ngemishini.
UKUZEZA UMSEBENZI NEMIBANDELA
Njengoba oomakhenikha basebenza endaweni yokuhamba kojantshi besitimela, kufanele bahambe ngaso sonke isikhathi. Oomakhenikha kufanele babe semsebenzini ubusuku nemini, ngempelasonto noma ngamaholide, bahlale behlala phansi behola okuthe xaxa. Kuyaqabukela, bangahileleka ezingozini zesitimela. Baxhumana nomuntu othutha, umphathi wesitimela, umuntu oshintshayo nothintayo.
IZINDABA ZOMSEBENZI NEMISEBENZI
Ochwepheshe bangasebenza ikakhulu eTurkey State Railways kanye nefektri kashukela, amafektri e-iron ne-iron, ezokuhamba zesitimela sangaphakathi sedolobha. Ukwanda kwabantu kuletha inkinga yokuhamba kwabantu abaningi. Enye yezindlela ezingokomnotho nezphephile zokuhamba ngobuningi isitimela. Ngeke kushiwo ukuthi ukuthuthwa kwezimpahla noma kwabagibeli ngesitimela ezweni lethu kuyinto esezingeni elifunekayo. Njengoba ukuthuthwa kwezitimela kubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni izwe, kuyisidingo sokwenza ukuhlaselwa okubalulekile kulo mkhakha ezweni lethu. Ukuthuthukiswa nokwenziwa kabusha kojantshi besitimela kusho nomsebenzi wabasebenza kakhulu ngemishini.
IZICWANGCISO ZEMFUNDO EYODWA
Ukuqeqeshwa ngomakhenikhi kuhlinzekwa ezikhungweni zokuqeqeshelwa emsebenzini ezihambelana ne-General Directorate ye-Turkey State Railways. Ngaphezu kwalokho, abafundi abaphothule ezikoleni zamabanga aphezulu eziqeqeshelwa ukuqeqeshelwa umsebenzi.
ISINGENISO EMFUNDAZINI WEZOBUCHWEPHESHE
Okungenani abafundi abathola iziqu ezikoleni zamabanga aphansi bayadingeka ukuze bathole imfundo yobuciko. - Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthola umbiko wekomiti elizwakalayo kusuka ezibhedlela ze-TCDD.
ISIQHAWU NOKUKHUNJULWA KWEMFUNDO
Ukuqeqeshwa kobungcweti kwezamachwepheshe kuqondisi Jikelele Lwezitimela ZaseTurkey; Inyanga ye-18 yokuphothula iziqu ze-TCDD Vocational High School, unyaka we-3 weziqu zezezimboni eziphakeme. Abathweswe iziqu esikoleni semfundo ephakeme yezimboni, i-TCDD General Directorate of Enterprise evulwe ngabasizi ukuhlolwa umakhenikha nabaphumelele, ngokubamba iqhaza ekuqeqesheni kanye nasezifundweni zinethuba lokuba ngumakhenikha. Lokhu, umsebenzi wenyanga we-3, kanye nomsebenzi wonjiniyela osiza umsebenzi wobunjiniyela kuze kube yilapho ilayisense yenziwe. Ekupheleni kwe-internship, ilayisense yokushayela inikezwa labo abaphumelele esivivinyweni.
Abafundi abasanda kuphothula iziqu ze-TCDD Vocational High School kanye nabaphothule izifundo ze-Industrial Vocational High School, abavunyelwe obala ukuhlolwa, baqala umsebenzi wabo njengabasizi bemishini. Ngemuva kwesikhathi esithile sokuqeqeshwa emsebenzini, bathola isihloko somshayeli. Labo abathola idiploma njengomakhenikha bangaba umakhenikha oyinhloko ngokuqhubeka nezifundo zabo.
ISCHOLARSHIP, IZIMALI NEZIMALI
Ngesikhathi sokuqeqeshwa kwangaphakathi emsebenzini okuhlelwe yi-General Directorate of Turkish State Railways (TCDD), amaholo anyangazonke asuka kwizinga kanye nezinga elishiwo yi-Law on Civil Serviceants No. 657 anikezwa abafundi abathola iziqu ezikoleni eziphakeme. Ukuqokwa kwalabo abaqashwe njengamakhenikha kwenziwa ngendlela yezisebenzi ezingapheli noma ezinesivumelwano.Labo abaqokwe njengabaqashwa ngokugcwele bathola amaholo njalo ngenyanga nge-2 umholo omncane kunxephezelo lwabo olukhethekile. Abasebenzi abanezinkontileka bathola amaholo asuka enyangeni asuka ku-4 kuya kuma-5 inani eliphansi lomholo.
Ubani uMechan How To Become Mechanic
Ukuthuthwa kwe-TCDD kuyothengisa imishini yomsebenzi
Ukuthutha kwe-TCDD Kuzokwenza i-73 Machinist Reception!
Ukumenyezelwa Kwenkambo Yabaqeqeshi be-TCDD
Abakhubazekile be-TCDD, abakhubazekile kanye nabasebenzi…
I-YHT Ingozi Inhlekelele Yokulimala I-Mechanic Spoke Ngesikhathi Sokuqala
Qeqesha Ngengozi ku-YHT Line eBilecik, 2 Machinist…
I-TCDD Mechanic nabagibeli bafuna ukugqoka
I-TCDD ivula indlela yokuqeqesha uMechanic
Amaholo e-TCDD Machinist Kungakanani i-2018
I-TCDD yokuThuthukisa imishini yokuThola imiphumela yokuhlola yeziLimi
Isaziso sethenda: DE 24000 Type locomotive engineer…
Isaziso sethenda: Izisebenzi ze-4 ezisebenza ngomakhenikha eGulf in
Isaziso sethenda: Abasebenzi beMishini ye4 eGulf in
Isaziso sethenda: DE 24000 hlobo locomotive mechanic…
Amathenda Amanje Asejantshi
UMasipala wase-Isparta kanye ne-TCDD Protocol kuzonciphisa umthwalo wethrafikhi edolobheni
Izinyathelo Zokhonkolo ezizothathelwa iSakarya Rail System Project
Isifunda saseMuratli seTekirdag Railway Splitting
I-CHP Gürer ibuze uNgqongqoshe uTurhan uphendule wathi: Imali mboleko Yezindlu ze-TCDD
Ukulindela eVangölü Express Adventure kuhle!
«Oct Sesha »